လာမယ့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မှာပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ကြံ့ ဖွတ်ပါတီအတွက် မဲဆွယ်တေးသီချင်းတစ်ပုဒ်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, March 24, 2012 Links to this post
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်တာတွေ အရေးယူပေးဖို့ NLD တောင်းဆို
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ထိခိုက်စေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ၊ အထက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ရန်ကုန်တဝိုက်မှာ ဖြန့်ဝေနေတာကို တာဝန်ရှိသူတွေက ဟန့်တားအရေးယူခြင်း မရှိတာဟာ ဒီလုပ်ရပ်ကို အားပေးရာ ရောက်နေတယ်လို့ NLDက ဒီကနေ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာ လိုက်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ NLDအတွင်းရေးမှူး ဦးဥာဏ်ဝင်းက RFA ကို အခုလို ပြောပါတယ်။
ဓအဓိက ကတော့ ဒီကာလမှာ ဒါတွေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ပြည်သူတွေကို အသိပေးတဲ့ သဘောပါ။ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနဲ့ဆိုင်တာပေါ့။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပေါ့။ တရားဥပဒေ ကိုင်တွယ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာ အများကြီးတာဝန်ရှိတာပေါ့။ လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့ အစိုးရ အနေနဲ့တောင်မှ ဒါမျုိုး မသင့်တော်ဘူး ဆိုတာမျုိုး ဟန့်တားတာတောင်မှ မကြားရတဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ဓ
ဒါ့အပြင် ရေဦးမြို့နယ်၊ ချောင်းဆုံကျေးရွာ ကော်မရှင်ဥက္ကဌက ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအတွက် မဲဆွယ်နေတာ၊ ပုသိမ်မြို့နယ်မှာ သမဝါယမ ဒုတိဝန်ကြီးက ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအတွက် စည်းရုံးရေးဆင်းနေတာ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကန့်ဘလူ-ကျွန်းလှနယ်တွေအတွက် NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်း စည်းရုံးရေးဟောပြောပွဲ ကျင်းပနေတုန်းမှာ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီဝင်တစ်ဦးက အဲဒီပွဲ အနားက ကောက်ရိုးပုံမီးရှို့ပြီး၊ ပွဲလန့်အောင် ဆောင်ရွက်တာတွေ ရှိနေတယ်လို့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အလားတူ တနင်္သာရီတိုင်း၊ ထားဝယ်ကောလိပ်မှာ သင်တန်းတက်မယ့် ဆရာ၊ ဆရာမတွေကို ကြိုတင်မဲ ကောက်ယူခဲ့တဲ့အတွက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၊ ထားဝယ်ခရိုင် ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေးကော်မတီက ကော်မရှင်ကို ကန့်ကွက်စာ ပေးပို့လိုက်ပါတယ်။
မတ်လ ၃၀ နဲ့ ၃၁ ရက်နေ့မှာမှ ကြိုတင်မဲ ပေးရမယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတွက် အခုရက်ပိုင်း ကောက်ယူမှုဟာ ဥပဒေနဲ့ မညီညွတ်တဲ့အတွက် ကော်မရှင်အနေနဲ့ ပြန်လည်စစ်ဆေးပေးဖို့ တင်ပြလိုက်တာပါ။ ဒီကိစ္စကို ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ ကော်မရှင်က ပြောဆိုကြောင်း၊ လောင်းလုံမြို့နယ်ကနေ ယှဉ်ပြိုင်မယ့် NLDကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးအောင်စိုးက RFA ကိုပြောပါတယ်။
အလားတူ မဲစာရင်း အမှားအယွင်း ဖြစ်နေတာကိုလည်း၊ NLDထားဝယ်ခရိုင်၊ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့က တင်ပြခဲ့တဲ့အတွက် ကော်မရှင်က ပြန်လည် စိစစ်ပေးတဲ့အခါ လူပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော် မဲပေးခွင့် ရသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်၊ မိုးကောင်း၊ ဗန်းမော်တို့၌ ဧပြီလ ၁ ရက်တွင်ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ်ရွေကောက်ပွဲများကို ရက်ရွှေ့ပြောင်းလိုက်ကြောင်းသိရ
ကချင်ပြည်နယ်ရှိ လစ်လပ်မဲ ဆန္ဒနယ် သုံးနေရာဖြစ်သော ဖားကန့်၊ ဗန်းမော်၊ မိုးကောင်းမြို့နယ်တို့တွင် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့၌ ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို လုံခြုံရေး အခြေအနေအရ ရက်ရွှေ့ပြောင်း လိုက်သည်ဟု သတင်းရရှိသည်။ မည်သည့်ရက်တွင် ပြန်လည်ကျင်းပမည်ဆိုသည်ကိုမူ မသိရှိရသေးပါ။
ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့၌ လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ် ၄၈ နေရာတွင် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပမည်ဟု ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ထုတ်ပြန် ကြေညာထားရာ ယခုကဲ့သို့ ရွှေ့ ဆိုင်းလိုက်သောကြောင့် ၄၅ နေရာ တွင်သာ ကျင်းပတော့မည်ဖြစ်သည်။
သတင်း..... Eleven Media Group
လွတ်လပ်သော ရွေးကောက်ပွဲ အကဲခတ်အဖွဲ့ Anfrel က မြန်မာအစိုးရအား ရိုးသားဖြောင့်မတ်ရန်ဆို
(Bangkok Post မှ 22 March 2012 ရက်စွဲပါ Anfrel calls for Myanmar sincerity သတင်းကို YC မှဘာသာ ပြန်ဆိုသည်)။
လွတ်လပ်သော အာရှ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်သူများ ကွန်ရက်အဖွဲ့ (Asian Networks for Free Elections- Anfrel) အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ ဆွမ်ဆရီ ဟာနာနမ်တာဆပ်နှင့် လက်ထောက်နှစ်ဦးကို မြန်မာအာဏာပိုင် များက ပြည်နှင်ဒဏ် ပေးပြီးနောက် ကြာသပတေးနေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး လွတ်လပ်ခွင့်ပေးမှုသည် ချွင်းချက် မရှိသင့်ဟု ဆွမ်ဆရီက ပြောကြားလိုက်သည်။
မစ္စဆွမ်ဆရီက မြန်မာအာဏာပိုင်များသည် သူမအား အင်္ဂါနေ့ ညပိုင်းက အတင်းအကျပ် ပြန်လည် ထွက်ခွာခိုင်းခဲ့ပြီး သူမ၏ လက်ထောက်များ ဖြစ်ကြသော ရန်ဆီမာနှင့် တက်ဆရူးတို့သည်လည်း နောက်တစ်နေ့တွင် အလားတူ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ လေ့လာ စောင့်ကြည်သူ စစ်မှုထမ်းဟောင်း မစ္စ ဆွမ်ဆရီသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၆ ရက်ကြာ နေထိုင်ပြီးနောက် ပြည်နှင်ဒဏ် ပေးခံရခြင်း ဖြစ်ပြီး လက်ထောက်နှစ်ဦးမှာမူ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညက ဘန်ကောက်သို့ ပြန်လည် ထွက်ခွာကြရန် မြန်မာ အာဏာပိုင်များ၏ အဓမ္မ ဖိအားပေးမှုကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရသည်။ anfrel အဖွဲ့သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ကာလအတွင်း အဖွဲ့အစည်းနှင့် မဟုတ်သည့် လွတ်လပ်သော အကဲခတ်စောင့်ကြည့်သူများအား အစိုးရက ခွင့်ပြုမပြု ဆိုသည်ကို အတိအကျ စုံစမ်းရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ မတ်လ ၁၅ ရက်ကပင် ရောက်ရှိနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ anfrel အာရှ ရွေးကောက်ပွဲ အကဲခတ် အုပ်စုသည် ရန်ကုန်တိုင်း ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှတစ်ဆင့် နေပြည်တော်သို့ တရားဝင် တောင်းဆို လျှောက်ထားခဲ့သော်လည်း မည်သည့် တုံ့ပြန်မှုကိုမျှ မရခဲ့ကြပေ။ ထို့ပြင် ယင်းတို့ ၃ ဦးသည် မှားယွင်းသော ပြည်ဝင်ဗီဇာဖြင့် ဝင်ရောက်လာခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အာဏာပိုင်များ၏ ပြန်လည် စွပ်စွဲမှုကို ခံကြရသည်။
anfrel အဖွဲ့ကို ပြည်နှင်ဒဏ် ပေးပြီးနောက်တွင် နေပြည်တော် အာဏာပိုင်များက ကုလသမဂ္ဂ၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ အီးယူ၊ ဂျပန်၊ တရုတ်၊ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံများမှ ရွေးကောက်ပွဲ အကဲခတ်သူ နှစ်ဦးစီနှင့် သတင်းထောက် ၃ ဦးစီကိုသာ ခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။ အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ များသည်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရွေးကောက်ပွဲ လေ့လာသူများ စေလွှတ်နိုင်ကြမည်ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ နောက်ဆုံးပြုလုပ်ခဲ့သော ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကြိုတင် စည်းဝါးရိုက်ထားသော အကဲခတ် လေ့လာသူ အနည်းသာ ရှိခဲ့ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးက ဝိုင်းဝန်း ရှုတ်ချခဲ့သော အဆိုပါရွေးကောက်ပွဲကို ဂုဏ်ပြု ချီးကျူးသော နိုင်ငံဟူ၍ မြောက်ကိုရီးယား တစ်နိုင်ငံတည်းသာ ရှိခဲ့သည်။ နေပြည်တော် အာဏာပိုင်များ ပြုလုပ်နေသော နိုင်ငံရေး လွတ်လပ်ခွင့် ဆိုသည်မှာ အစိုးရနှင့် အဆက်အသွယ်ရှိသူများ အတွက် သီးသန့် ဖြစ်ပုံရသည်ဟု မနှစ်က ဆွမ်ဆရီက ဘန်ကောက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
"တကယ်လို့ ဒီနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ ကူးပြောင်းမှုကို အဆက်မပြတ် ပြုလုပ်မယ်၊ မြန်မာအစိုးရကလည်း ပွင့်လင်း ရိုးသား ဖြောင့်မတ်မယ် ဆိုရင် ဒေသတွင်းက အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် စောင့်ကြည့် အကဲခတ်နိုင်အောင် ခွင့်ပြုရမှာပေါ့" ဟု သူမက ဆိုသည်။
အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှုများ ရုတ်သိမ်းရေးနှင့် အလဲအလှယ် လုပ်ရန် အနောက်နိုင်ငံ အကဲခတ်များကို ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နေပြည်တော် အစိုးရတွင် မြှုပ်ကွက်တစ်ခုခု ရှိနေသည်ဟု မစ္စဆွမ်ဆရီက သံသယ ရှိလျက် ရှိသည်။ "အရေးကြီးဆုံး အချက်ကတော့ ဒီအကဲခတ် လေ့လာသူတွေဟာ ဘယ်မဲဆန္ဒနယ်ကိုမဆို ဘယ်မဲရုံကိုမဆို လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားခွင့် ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ အစိုးရက ရွေးချယ် ပြသတဲ့ နေရာတွေကို ကြည့်ရုံနဲ့ မလုံလောက် ပါဘူး။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် စောင့်ကြည့် လေ့လာတယ်ဆိုတာကလည်း အပေါ်ယံ အတုပဲ ဖြစ်မှာပေါ့" ဟု ပြောသည်။
ဆွမ်ဆရီအနေဖြင့် စီးပွားရေး ပြည်ဝင်ဗီဇာ ပြန်လည်လျှောက်ထား၍ ရွေးကောက်ပွဲကို သွားရောက် လေ့လာ ရမည်လား ဆိုသည်ကို မဆုံးဖြတ်ရသေးပါဟု မစ္စ ဆွမ်ဆရီက ဆက်လက် ပြောသည်။
လာမည့် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကြိုတင် အကွက်ချ ကြံစည်မှုများ ရှိနိုင်သည်ဟု ပြည်တွင်း ပြည်ပ လေ့လာသူများက သံသယ ရှိနေကြသည်။
၈၈ မျိုးဆက်၏ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး ကွန်ရက်ဖွဲ့စည်း
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ အဖွဲ့မှ လာမည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာမည့် ကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းထားပြီး စောင့်ကြည့်လေ့လာသွားမည်ဟု ယနေ့ နံနက် ၁၁နာရီကရန်ကုန်မြို့၌ ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောဆိုသွားသည်။
ကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းခြင်းသည် ပါတီအောင်နိုင်ရေး မဟုတ်သလို ယခုအဖွဲ့အစည်းလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းထံမှ အထောက်အပံယူမည် မဟုတ်ဟုလည်း ပြောဆိုသွားသည်။ မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့မှစတင်၍ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို စုဆောင်းကာ စတင်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ပြောဆိုသွားသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, March 23, 2012 Links to this post
"ဘဏ်သို့ရောက်လာသော အက်ဖ်အီးစီများကို ပြန်မထုတ်သော နည်းလမ်းဖြင့် သိမ်းနေပြီ"
ဘဏ်စနစ်ထဲသို့ ရောက်လာသည့် အက်ဖ်အီးစီကို ပြန်မထုတ်ပေးသော နည်းလမ်းဖြင့် ပြန်လည်သိမ်းဆည်းနေပြီဟု မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး က ပြောသည်။
အက်ဖ်အီးစီအား ဖျက်သိမ်းသွားမည်ဟု ဗဟိုဘဏ် ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှ တရားဝင် ထုတ်ဖော် ပြောဆိုမှုများရှိ်ခဲ့ရာ မည်သည့် အချိန်နောက်ဆုံး ထားကာ သိမ်းယူမည့်အပေါ် ဗဟို ဘဏ်မှ တာဝန်ရှိသူကပင် ‘သတိမထား မိကြလို့ပါ။ ဗဟိုဘဏ်အပါအဝင် ပုဂ္ဂလိကက ဘယ်ဘဏ် ကို ရောက်ရောက် ပြန်မှ မထုတ်ပေးတော့တာ”ဟု ပြောသည်။ လှည့်လည် သုံးစွဲငွေများထဲမှ ၁၅ ကျပ်၊ ၄၅ ကျပ်နှင့် ကျပ် ၉ဝ တန် ငွေစက္ကူကဲ့သို့ တဖြည်းဖြည်း သိမ်းယူသည့် နည်းလမ်းများဖြင့် ပပျောက်သွားရန် ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ရာ အက်ဖ်အီးစီမှာမူ အချိန်များစွာ ယူရမည်တော့ မဟုတ်ဟု အထက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်က ထပ်လောင်းပြောသည်။ နိုင်ငံတွင်း၌ အက်ဖ်အီးစီး စတင်ထုတ်စဉ် အခါကတည်းက ယာယီ သဘောသာဖြစ်ပြီး ပြန်လည် သိမ်းမည့်အစီအစဉ် ရှိထားပြီးဖြစ်သော်လည်း၊ အချိန် ကြာမြင့်သွား ခဲ့ကြောင်း၊ ယခုမှာမူ အက်ဖ်အီးစီကို သိမ်းရန်ဆုံးဖြတ် ခဲ့မှုကြောင့် ယခုကဲ့ သို့ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်က ထပ်လောင်းဆိုသည်။
”အက်ဖ်အီးစီကို စထုတ်ကတည်းကိုက ပြည်တွင်း ကို ရောက်လာ တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ ငွေကြေးကိုင်ဆောင် သုံးစွဲရမှု အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးထားတဲ့ သဘောပဲလေ။ အခုနိုင်ငံခြား ငွေလဲလှယ် တဲ့ကောင်တာတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖွင့်ပေးထားတဲ့ အတွက် ဒီအက်ဖ်အီးစီ ကို ပြန်သိမ်းတဲ့သဘောပါပဲ။ လက်ရှိကိုင်တွယ် သုံးစွဲနေမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာပြဿနာမှ မဖြစ်စေရပါဘူး။ ဆက် သုံးနေလို့ရပါ တယ်။ ဘယ်သူ့အတွက်မှ နစ်နာဆုံးရှုံးမှု မရှိစေအောင် စီစဉ်ထားတာပါ။ ဒီအတွက် ဘာမှစိုးရိမ်စရာ မရှိ ပါဘူး”ဟု ဗဟိုဘဏ်မှ တာဝန်ရှိသူက ဆက်လက်ပြောသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဒေါက်တာ စိုးထွန်းက ”ဒါက ဗဟိုဘဏ် အနေနဲ့ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တာကို လုပ်တဲ့သဘောလို့ပဲ မြင်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဗဟိုဘဏ်အနေဖြင့် အက်ဖ်အီးစီအား ဈေးကွက်မှတဖြည်းဖြည်း ဖျက်သိမ်းသွားနေသည့်အပြင် အမျိုးမျိုးဖြစ်နေသော နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်နှုန်း ထားအား တစ်မျိုး တည်းဖြင့် နှုန်းရှင် သတ်မှတ်သော ငွေကြေး မူဝါဒအား ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အစတွင် ပြောင်းလဲ ကျင့်သုံး သွားမည် ဟုလည်း ဗဟိုဘဏ်မှသိရသည်။ ဗဟိုဘဏ် တာဝန်ရှိသူက ”နိုင်ငံတကာမှာ ကျင့်သုံးနေတဲ့ ငွေကြေး စနစ်အတိုင်း သွားတဲ့ သဘော ပါပဲ”ဟုပြောသည်။ စီးပွားရေး ပညာရှင် ဒေါက်တာစိုးထွန်းက ”ဒါကလည်း ကောင်း တဲ့ လက္ခဏာပါ။ ဒါကိုဗဟိုဘဏ်က ထိန်းညှိပေးဖို့ တော့ လိုပါတယ်။ ဒါမှ ဈေးကွက်က လည်ပတ်နိုင်မှာပါ” ဟု ပြောသည်။
ပြည်သူများကြား ပျံ့နှံ့နေသော ကဗျာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မရေးပါ
ပြည်သူများအကြား ပျံ့နှံ့နေသော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ၏ပုံပါ ကဗျာလက်ကမ်း စာစောင်နှင့် ကောလာ ဟလ သတင်း များမှာ မဟုတ် မှန်ကြောင်း ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ ဝင် ဦးအုန်းကြိုင်က ငြင်းဆိုလိုက်သည်။
''ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ဒီကဗျာ ကိုမရေးဘူး။ အဖွဲ့ ချုပ်အနေနဲ့လည်း ထုတ်ဝေမှု မရှိပါဘူး။ အဲဒီကဗျာမှာ ပုဂ္ဂလိကတိုက်ခိုက်ရေး သားထားတာ ဖတ်ရပါတယ်''ဟု ဦးအုန်းကြိုင် က ပြောသည်။ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ပြည်သူ လူထုအကြား ရောက်ရှိလာ သော လေးခေါက်ချိုး ရှစ်မျက်နှာ ပါ ကဗျာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်ကိုယ်တိုင်ရေးသားထားခြင်း မဟုတ်မှန်ကြောင်းနှင့် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်မှာ လုပ်ကြံ ခံရနိုင် သည်ဟုဆိုကာ ၄င်းကိုယ်တိုင် သေတမ်းစာရေး သားထားသည် ဟု ပျံ့နှံ့ လျက်ရှိရာ မဟုတ်မှန် ကြောင်း ဒီချုပ်ပါတီ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ဥက္ကဋ္ဌ ဦးနိုင်းနိုင်းက ထပ်မံငြင်းဆို လိုက်သည်။ ''ဒါကို အများက မေးလာရင် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် ဖြေပါလိမ့်မယ်။ ပါတီအ နေနဲ့လည်း မဝေပါဘူး။ ဘယ်လိုအ ကြောင်းနဲ့မှမဝေပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကတော့မျိုးစုံအန္တရာယ် ရှိတာပေါ့။ ဘာသာရေးအရရော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရပါ မျိုးစုံကာ ကွယ်ပေးထားပါတယ်။ ဒီကဗျာနဲ့ ပတ်သက်လို့ လာပြောတာတွေ တော့ ရှိတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာမှတော့ ထုတ်ပြန်ဖို့ မရှိပါဘူး''ဟု ဦးနိုင်းနိုင်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
ယင်းအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မြို့နေအမျိုးသမီး တစ်ဦးက ''အန်တီက သေတမ်း စာရေးတယ်ဆိုတာ ဟုတ်လား။ နောက်သူက လုပ်ကြံခံရမယ်လို့ သိ ထားတယ်တဲ့။ သူပိုင်ဆိုင်သမျှ တွေကို နိုင်ငံတော် အတွက် လှူခဲ့ မယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေထွက်နေ တာ'' ဟု ပေါ်ပြူလာ နယူးစ်သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့သည်။ ပြည်သူ့အချစ်တော် ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကဗျာဟု ခေါင်းစဉ်ပါရှိ သည့် လက်ကမ်းစာ စောင်ကဗျာတွင် ကဗျာခေါင်းစဉ် မပါရှိသလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည် ရေးသားထားသည်ဟုလည်း မပါရှိပေ။ ယင်းကဗျာ၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဝမ်းကွဲ မောင် ပြည်ပရောက် ဒေါက်တာ စိန်ဝင်းနှင့် ပတ်သက်သည် များ၊ ၄င်းရရှိသည့် ငြိမ်းချမ်း ရေး နိုဗယ်ဆုငွေဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၃ သန်းအား ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးရန်ပုံငွေ လှူဒါန်း ရန် စသည်ဖြင့် ရေးသားထားသည်။
သတင်း...... Popular News
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, March 22, 2012 Links to this post
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီရေး စည်းရုံး လှုံ့ဆော်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က မကြာမီ အချိန် အတွင်း ပြည်ပသို့ ခရီးသွားရန် မျှော်လင့်ကြောင်း မတ် ၁၅ ရက်တွင် ပြောကြား သည်။
၄င်းသည် နိုဘယ် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုရှင် အနေဖြင့် ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှစပြီး ပထမဆုံးအကြိမ် အခြားတစ်နိုင်ငံသို့ခရီးသွားခြင်း ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ပြန်လည် လွတ်မြောက် လာချိန်အထိ လွန်ခဲ့သော ၂၂ နှစ်၏ အများစုကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့် နေခဲ့ရသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က
"မကြာမီ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြင်ပကို ခရီးသွားဖို့ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိတယ်လို့ ကျွန်မ မျှော်လင့်တယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့ ရှင်တို့ရှိရာကိုလာရောက်ပြီး အချိန်တို ကာလပဲဖြစ်ဖြစ် ရှင်တို့နဲ့တွေ့ဆုံ နိုင်မှာဖြစ်တယ်" ဟု ဟောင်ကောင် တက္ကသိုလ်မှ ဥပဒေဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဒေါက်တာဘွဲ့ကို လက်ခံစဉ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဗီဒီယိုမက်ဆေ့ခ်ျ တစ်ခုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဖိတ်ကြားမှု အများအပြားရှိခဲ့သော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကွယ်လွန်ခါနီး သူမ၏မိခင်ကို ပြုစုရန် ဗြိတိန်မှပြန်လာခဲ့သည့် ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှစပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့ထွက်ခွာမှု မပြုခဲ့ပေ။
ခင်ပွန်း မိုက်ကယ်အဲရစ် ဗြိတိန်တွင် ကင်ဆာရောဂါဖြင့် သေလုမျောပါးရှိနေသည့် ၁၉၉၉ ခုနှစ်၌ပင် သူမသည် စစ်အစိုးရက တိုင်းပြည်သို့ ပြန်ဝင်ခွင့်မပေးမည်ကို စိုးရိမ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှထွက်ခွာရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်တွင် အရပ်သားအစိုးရ အာဏာရချိန်မှစပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ခွင့်ရ လာသည်။ သူမ၏ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) သည် လာမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများတွင် လစ်လပ်နေရာ ၄၈ နေရာအနက် ၄၇ နေရာ၌ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အစိုးရက သူမသည် လွတ်လပ်စွာ ခရီးသွား နိုင်သည်ဟု ပြောကြားသည်။ သို့သော် သူမအနေဖြင့် တိုင်းပြည်သို့ ပြန်လာခွင့်မရမည်ကို သူမအပေါ် ထောက်ခံသူ များက စိုးရိမ် ပူပန်နေကြဆဲ ရှိသည်။ ဧပြီ ၁ ရက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ဒေါ်အောင်စုကြည်က ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ကို လက်ခံစဉ် သူမ၏တိုင်းပြည်၌ ဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, March 21, 2012 Links to this post
စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်မှု၊ စာနယ်ဇင်းသမားများ၏ အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ရန် ဦးတည်၍ဖွဲ့စည်းရန် ပြင်ဆင်နေသည့် မြန်မာစာနယ်ဇင်း သမဂ္ဂအား မတ်လအတွင်း ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း ယင်းကိစ္စရပ်ကို ဦးတည်ဆောင်ရွက်နေသူ ဦးဇော်သက်ထွေးက ယုဇနဟိုတယ်တွင် ပြုလုပ် သည့် ဒုတိယအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ သမဂ္ဂဖွဲ့စည်း ပေါ်ပေါ်လာမည်ဆိုပါက ပုဂ္ဂလိကပုံနှိပ်မီဒီယာလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်နေသူများ၊ ပုဂ္ဂလိက ရုပ်သံနှင့် ရေဒီယိုတွင် ပါဝင်နေသူ များ၊ လွတ်လပ်သော အင်တာနက်သတင်းနှင့် မီဒီယာလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူအားလုံး ပါဝင်ခွင့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“မီဒီယာလုပ်ငန်းနဲ့ ထိစပ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကို ပါဝင်စေချင်တာပါ”ဟု ဦးဆောင်ကာ လှုပ်ရှားနေသည့် စာရေးဆရာ မာဂျေက ဆိုသည်။
မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့သည့် ဒုတိယအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် မြန်မာစာနယ်ဇင်းသမဂ္ဂ ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက် လုပ်ငန်းကော်မတီငါးရပ်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
“မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာရယ်၊ ဘဏ္ဍာရေးရယ်၊ စည်းရုံးရေးရယ်၊ သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးရယ် ရုံးအဖွဲ့ရယ်ပါ။ ဒီလိုလှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်နိုင်ဖို့ Stake -holders တစ်ချို့ဆီက အလှူငွေ ကျပ်သိန်းနှစ်ဆယ်ကျော် ရထားပါတယ်”ဟု စာရေးဆရာ မာဂျေက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
အဆိုပါသမဂ္ဂသည် သမ္မတကြီး ဖွဲ့စည်းခိုင်းသည့် လွတ်လပ်သည့် စာနယ်ဇင်းကောင်စီ ဖွဲ့စည်းရန် ပြင်ဆင်နေချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်နေပြီး အင်အား ၁၅၀ ကျော်ရှိကာ နယ်မြို့ကြီးများတွင် အသင်းများ တည်ထောင်ရန် ပြင်ဆင်နေသည့် မြန်မာသတင်းသမားများ ကွန်ရက်၏ စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အရှိန်အဟုန်မြှင့်နေသည့် အချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်နေသည်။
ကြံ့ဖွံ့ ဦးအောင်သိမ်းလင်း က ယခုလို ယတြာလုပ်ပြီး မဲဆွယ်စည်းရုံးနေပုံ
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, March 20, 2012 Links to this post
The Voice ဂျာနယ်ပါ သတင်း​နဲ့​ ဆက်စပ်ပြီး​ ပြန်-ဆက် ညွှန်ချုပ် ဦး​ရဲထွဋ်နဲ့​ ဆက်သွယ်​မေး​မြန်း​ချက်
မတ် ၁၂ ရက်နဲ့​ ၁၈ ရက်စွဲ ထုတ်​ဝေခဲ့​တဲ့​ The Voice ဂျာနယ် အတွဲ ၈ မှာပါတဲ့​ ဝန်ကြီး​ဌာနတချို့​ရဲ့​ ကျပ်သိန်း​ထောင်ချီ အလွဲသုံး​စား​လုပ်မှုများ​ စစ်​ဆေး​တွေ့​ရှိတယ်ဆိုတဲ့​ ပတ်သက်ပြီး​တော့​ သတ္ထုတွင်း​ ဝန်ကြီး​ဌာနက တုံ့​ပြန်ချက်ကို မြန်မာ့​အလင်း​ သတင်း​စာမှာ ​ဖော်ပြခဲ့​တာ ​တွေ့​ရပါတယ်။
ဒီ မြန်မာ့​အလင်း​ သတင်း​စာမှာ ​ဖော်ပြခဲ့​တဲ့​ ​ကြေညာချက်က သတ္ထုတွင်း​ ဝန်ကြီး​ဌာနရဲ့​ ​ကြေညာချက်ဖြစ်​ပေမဲ့​ ပြန်ကြား​ရေး​ ဝန်ကြီး​ဌာနက တဆင့်​ သတင်း​ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့​တာ ဖြစ်တဲ့​ အတွက် ဒီ ပြန်ကြား​ရေး​ ဝန်ကြီး​ဌာနရဲ့​ ညွှန်ချုပ် ဦး​ရဲထွဋ်ကို ဆက်သွယ်ပြီး​တော့​ ဒီသတင်း​ အ​ပေါ်မှာ ပြန်ကြား​ရေး​ဝန်ကြီး​ဌာနရဲ့​အမြင်ကို သုံး​သပ်​ဆွေး​နွေး​ ​မေး​မြန်း​ထား​ပါတယ်။
ဦး​ရဲထွဋ်ခင်ဗျား​။ ​လော​လောဆယ်မှာ ​ငွေကွာတဲ့​ ဖြစ်စဉ်ထဲမှာ ဝန်ကြီး​ဌာန ၆ ခု လို့​ ကျ​နော်တို့​ သိရပါတယ်။ ပြန်ကြား​ရေး​ ဝန်ကြီး​ဌာနဘက်က​ရော ဒီ ​ငွေကွာတယ် ဆိုတဲ့​သတင်း​ ထွက်​ပေါ်​နေတာနဲ့​ ပတ်သက်ပြီး​တော့​ ဆရာတို့​ဘက်က ဘယ်လို သုံး​သပ်ချက် ရှိလဲ။
“ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့​ ပတ်သက်လို့​ ကျ​နော် နည်း​နည်း​လေး​ ရှင်း​ပြချင်ပါတယ်။ The Voice မှာ ပါတဲ့​ ဖြစ်စဉ်က မြန်မာ့​အလင်း​ သတင်း​စာတိုက်မှာ ကျ​နော်တို့​ ​ငွေ​ကြေး​နဲ့​ အုပ်ချုပ်မှု ကိစ္စ အား​လုံး​ကို တာဝန်ယူတဲ့​ မန်​နေဂျာ ဦး​ထွန်း​ထွန်း​လတ်၊​ ​နောက် သတင်း​စာဖြန့်​ချိ​ရေး​တာဝန်ယူရတဲ့​ လက်​ထောက်မန်​နေဂျာ ဦး​ကျော်မင်း​ဦး​၊​ ​နောက် ​ငွေစာရင်း​ တာဝန်ယူရတဲ့​ လက်​ထောက်မန်​နေဂျာ ဦး​ဝင်း​မြင့်​တို့​ ၃ ​ယောက် ​ပေါင်း​ပြီး​တော့​မှ နိုင်ငံ​တော်ကို သွင်း​ရမယ့်​ သတင်း​စာဖိုး​ကို မသွင်း​ဘဲနဲ့​ သူတို့​ အလွဲသုံး​စား​ လုပ်ခဲ့​တဲ့​ အမှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ​ကြောင့်​ ကျ​နော်တို့​ ဝန်ကြီး​ဌာနမှာ​တော့​ ဒီလုပ်ငန်း​အား​လုံး​ဟာ ​ငွေ​ကြေး​သုံး​စွဲတဲ့​အခါမှာ လိုက်နာရမယ့်​ စည်း​မျဉ်း​တွေကို တိတိကျကျ သတ်မှတ်ထား​ပါတယ်။ သို့​သော် ဒီမှာ တာဝန်ယူရတဲ့​ သူ​တွေက ကိုယ်တိုင်က ဒါကို အလွဲသုံး​စား​ လုပ်တဲ့​အခါမှာ နှစ်ပတ်လည် စာရင်း​စစ်တဲ့​ အခါကျ​တော့​ ဒီ​ငွေသွင်း​တဲ့​အခါမှာ ကွဲလွဲမှု​တွေ ရှိ​နေ​ကြောင်း​ ကျ​နော်တို့​ စပြီး​တော့​ ​တွေ့​ပါတယ်။ ​ယေဘုယျ တိတိကျကျ ​ပြောရရင်​တော့​ မနှစ်က နှစ်လည်​လောက်မှာ​ပေါ့​။ ဒါကို သိတဲ့​အချိန်မှာ ဝန်ကြီး​က ဦး​ဆောင်ညွှန်ကြား​ရေး​မှူး​ တ​ယောက် ဦး​စီး​တဲ့​ စုံစမ်း​ရေး​အဖွဲ့​ကို ဖွဲ့​ပြီး​တော့​ ခိုင်း​ပါတယ်။ စစ်တဲ့​အခါမှာ အလွဲသုံး​စား​ လုပ်​ကြောင်း​ ​ပေါ်လွင်တဲ့​ အတွက်​ကြောင့်​ မို့​လို့​ တာဝန်ရှိတဲ့​ ဝန်ထမ်း​တွေ အား​လုံး​ကို ဥပ​ဒေအရ တရား​စွဲပြီး​ပါပြီ။ ​နောက်ထပ် ဒီလို ဖြစ်စဉ်မျိုး​ မဖြစ်​အောင် အဆင့်​ဆင့်​ ကြပ်မတ်တဲ့​ နည်း​လမ်း​တွေကိုလည်း​ ထပ်ပြီး​တော့​ သတ်မှတ်ပြီး​ လိုက်နာ ​ဆောင်ရွက်​နေပါတယ်။ ဒါက​တော့​ ပြန်ကြား​ရေး​ဌာနရဲ့​ ဖြစ်စဉ်ပါပဲ။”
ပြန်ကြား​ရေး​ဝန်ကြီး​ဌာနရဲ့​ ​ငွေကွာတဲ့​ အ​ပေါ်မှာ အ​ရေး​ယူ ​ဆောင်ရွက်တဲ့​ ကိစ္စ​ပေါ့​။ ဒါ​ပေမဲ့​ မ​နေ့​က သတင်း​စာမှာ ​တွေ့​ရတဲ့​ သတင်း​ အ​ရေး​အသား​နဲ့​ ကျ​တော့​ ဆရာတို့​ ပြန်ကြား​ရေး​ ဝန်ကြီး​ဌာနက ​ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ရတဲ့​ သ​ဘောလား​။
“ကျ​နော်တို့​ သတင်း​စာမှာပါတဲ့​ သတင်း​က​တော့​ သတ္ထုတွင်း​ ဝန်ကြီး​ဌာနရဲ့​ လုပ်​ဆောင်ချက်ကိုပဲ သတင်း​အဖြစ် ကျ​နော်တို့​ ​ဖော်ပြတာပါ။ ဒီ​နေရာမှာ ကျ​နော်တခု ရှင်း​ပြချင်တာက The Voice က ဒီသတင်း​ကို ​ရေး​တဲ့​အခါမှာ သတင်း​ခေါင်း​စဉ်ကို ကြည့်​လိုက်မယ်ဆိုရင် ဝန်ကြီး​ဌာနအချို့​၏ ​ငွေသိန်း​ထောင်ချီ အလွဲသုံး​စား​ လုပ်မှုမှာ စစ်​ဆေး​တွေ့​ရှိမှုများ​ လို့​ ​ခေါင်း​စဉ် တပ်ခဲ့​တယ်။ ကျ​နော်တို့​ ဝန်ကြီး​ဌာနနဲ့​ ပတ်သက်ရင်လည်း​ ဂျာနယ်ထဲမှာ သတင်း​ထောက်က ဘယ်လို ​ရေး​လဲဆို​တော့​ ပြန်ကြား​ရေး​ ဝန်ကြီး​ဌာန၏ ​ငွေအလွဲသုံး​စား​ ပြုမှုများ​ လို့​ ​ရေး​ထား​တယ်။ စာဖတ် ပရိသတ်တ​ယောက်က အဲဒါကို ကြည့်​လိုက်မယ်ဆိုရင် ခုနက ကျ​နော်​ပြောခဲ့​တဲ့​ ဝန်ထမ်း​ ၃ ​ယောက် ကျူး​လွန်ခဲ့​တဲ့​ ပြစ်မှုကို ဝန်ကြီး​ဌာနက လူကြီး​တွေ ကိုယ်တိုင်က ကျူး​လွန်တယ် ဆိုတဲ့​ နား​လည်မှု လွဲမှား​သွား​နိုင်တာကို ​တွေ့​ရတယ်။ စာနယ်ဇင်း​ ကျင့်​ဝတ်အရ ဆိုရင်​တော့​ အဲဒါ သတင်း​ထောက်နဲ့​ အယ်ဒီတာက စာဖတ်သူကို လွဲမှား​တဲ့​ သ​ဘောမျိုး​(misleading) လုပ်တဲ့​ သ​ဘောမျိုး​ ​ရောက်​နေတယ် လို့​ ကျ​နော်တို့​ မြင်တယ်။”
စကား​လုံး​ အသုံး​အနှုန်း​မှာက​တော့​ ပြန်ကြား​ရေး​ဝန်ကြီး​ဌာန၏ ​ငွေအလွဲသုံး​စား​လုပ်မှုလို့​ ​ရေး​ထား​တဲ့​အ​ပေါ် ဆရာတို့​က ဒါကို ​ဝေဖန်တာ​ပေါ့​။ ပြန်ကြား​ရေး​ ဝန်ကြီး​ဌာနမှာ ပြဿနာဖြစ်​နေတဲ့​ ဝန်ထမ်း​တွေ​ကြောင့်​လို့​ မ​ရေး​ထား​တဲ့​အတွက်လို့​ ဆရာက ဆိုလိုချင်တာလား​။ အဲဒီလို ​ဝေဖန်ချင်တာလား​။
“မှန်ပါတယ်။ တကယ်​တော့​ ဂျာနယ်တိုက်အ​နေနဲ့​ ပြန်ကြား​ရေး​ဝန်ကြီး​ဌာနမှ ဝန်ထမ်း​အချို့​ ​ငွေအလွဲသုံး​စား​ ပြုလုပ်မှုများ​ ​တွေ့​ရှိလို့​ ဆိုရင် တမျိုး​ပေါ့​။ ဒါဆိုရင် ကျ​နော်တို့​က ဘယ် ဝန်ထမ်း​ဆိုတာ ဖတ်တဲ့​သူက နား​လည်တာ​ပေါ့​။ ဒါ​ပေမဲ့​ သူတို့​ ​ခေါင်း​စဉ် တပ်လိုက်တာကိုက ဌာနအချို့​၊​ ပြန်ကြား​ရေး​ ဝန်ကြီး​ဌာန၏ လို့​ ဆို​တော့​ ဝန်ကြီး​ဌာနကြီး​ တခုလုံး​ကိုက ဒီကိစ္စကြီး​မှာ ပါဝင် ပတ်သက်​နေပြီး​ လုပ်တဲ့​ ပုံစံမျိုး​ဆို​တော့​ ဒါက သိပ်ပြီး​ ကျင့်​ဝတ်နဲ့​ မညီဘူး​လို့​ ယူဆပါတယ်။”
မ​နေ့​က သတင်း​စာရဲ့​ ​ကြေညာချက်မှာ ​တွေ့​တာ​ပေါ့​။ သတင်း​စာ​ကြေညာချက်မှာ သတ္ထုတွင်း​ ဝန်ကြီး​ဌာနက​နေပြီး​တော့​ ဥပ​ဒေ​ကြောင်း​အရ ​ဆောင်ရွက်မယ်လို့​ ​ရေး​ထား​တာ ​တွေ့​ရပါတယ်။ သတ္ထုတွင်း​ဌာန ဝန်ကြီး​က ဆိုလိုသည် ဒါမှမဟုတ် တာဝန်ရှိသူတ​ယောက်က ​ပြောကြား​သည်လို့​ ကျ​နော်တို့​ မ​တွေ့​ရပါဘူး​။ ဒါက သတ္ထုတွင်း​ ဝန်ကြီး​ဌာနရဲ့​ ​ကြေညာချက်ကိုပဲ ​ဖော်ပြတာလား​။ ဘယ်လို ယူဆရမလဲ။
“သတ္ထုတွင်း​ ဝန်ကြီး​ဌာနက​တော့​ The Voice သတင်း​မှာ ပါတဲ့​ အချက်​တွေက မှား​ယွင်း​တဲ့​ အတွက်​ကြောင့်​မို့​ ဌာန ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်တယ်။ ပြည်သူ​တွေရဲ့​ ယုံကြည်မှု ​လျော့​စေတဲ့​အတွက် ဥပ​ဒေ​ကြောင်း​အရ အ​ရေး​ယူ ​ဆောင်ရွက်ဖို့​ ရှိပါတယ် ဆိုတဲ့​ သတင်း​ထုတ်ပြန်ချက်လို အ​ကြောင်း​ကြား​စာ မျိုး​ ပြန်ကြား​ရေး​ဌာနကို ပို့​ပါတယ်။ ပို့​တဲ့​ အတွက်​ကြောင့်​မို့​လို့​ ဒီအ​ကြောင်း​ကြား​စာ ထဲက​နေပြီး​တော့​မှ နိုင်ငံတကာ သတင်း​စာ​တွေ ကျင့်​ဝတ်လိုမျိုး​ သူတို့​ရဲ့​ သတင်း​ထုတ်ပြန်ချက်ထဲက​နေ ကျ​နော်တို့​က ​ကောက်နှုတ် အသိ​ပေး​သင့်​တဲ့​ ဟာကို ထုတ်ပြီး​တော့​မှ သတင်း​အဖြစ်နဲ့​ ​ရေး​လိုက်တဲ့​ သ​ဘောပါ။”
စာဖတ်သူ​တွေ အမြင်မှာကျ​တော့​ ဒီ သတ္ထုတွင်း​ ဝန်ကြီး​ဌာန က​နေပြီး​တော့​ အဲဒီလို တုံ့​ပြန်တယ် ဆိုတာကို ​တွေ့​တဲ့​အခါကျ​တော့​။ ပြီး​ခဲ့​တဲ့​ ရက်ပိုင်း​က သတင်း​တွေ ထွက်​နေတာက စိုက်ပျိုးရေး၊​ ပြန်ကြား​ရေး​၊​ စက်မှု၊​ သတ္ထုတွင်း​ စသည်ဖြင့်​ပေါ့​။ တခြား​ ဝန်ကြီး​ဌာန​တွေက ဘာမှ မ​ပြောဘူး​။ သတ္ထုတွင်း​ ဝန်ကြီး​ဌာန တခုတည်း​ပဲ သတင်း​ထုတ်ပြန်ချက် ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့​ အခါကျ​တော့​ စာဖတ်သူ အမြင်မှာ တမျိုး​များ​ ဖြစ်နိုင်မလား​။
“ကျန်တဲ့​ ဝန်ကြီး​ဌာန​တွေ​တော့​ ဘာ​တွေလုပ်​နေလဲ ဆိုတာကို မသိပါဘူး​။ ကျ​နော်တို့​ ဝန်ကြီး​ဌာနမှာ​တော့​ ခုန ​ဖြေလိုက်သလို​ပေါ့​။ သူတို့​ သတင်း​ ​ခေါင်း​စဉ် တပ်တဲ့​ ​နေရာမှာ သတင်း​စာသား​ ​ရေး​တဲ့​အခါမှာ ကျင့်​ဝတ်နဲ့​ သိပ်မညီတဲ့​ ဟာမျိုး​တွေကို သုံး​သပ်ပြီး​တော့​ ဝန်ကြီး​ဆီကို တင်ပြထား​ပါတယ်။ ဝန်ကြီး​က ဘာ ဆုံး​ဖြတ်မယ်ဆိုတာ မသိရ​သေး​ပါဘူး​။ ပြန်ကြား​ရေး​ဌာနကလည်း​ သတင်း​ လွတ်လပ်ခွင့်​ကို တာဝန်ရှိမှုနဲ့​ ပူး​တွဲပြီး​ ကျင့်​သုံး​တာမျိုး​ပဲ လိုချင်ပါတယ်။ သတင်း​ထောက်အ​နေနဲ့​ တဆင့်​ပြော သတင်း​ဆိုရင်လည်း​ ဒါ မှန်၊​ မမှန် ​နောက်ထပ် သတင်း​ရင်း​မြစ်က​နေ အတည်ပြုရပါမယ်။​ တကယ်လို့​ မူရင်း​ အစီရင်ခံစာကို ​ရေး​တယ်ဆိုရင်လည်း​ အစီရင်ခံစာရဲ့​ ဆိုလိုချက်နဲ့​ သူ သတင်း​မှာ ​ရေး​တဲ့​ ဟာနဲ့​က အဓိပ္ပာယ် ကွဲလွဲ မသွား​ဖို့​ လိုအပ်ပါတယ်။ တာဝန်ရှိတယ်လို့​ ထင်ပါတယ်။”
ဥပ​ဒေ​ကြောင်း​အရ ​ဆောင်ရွက်သွား​မယ် ဆိုတဲ့​ သ​ဘောကို ပြည်တွင်း​ သတင်း​ မီဒီယာ​လောကမှာ ဒါ တရား​စွဲတာလို့​ပဲ နား​လည်တာပါ။ ဒါ​ပေမဲ့​ ဥပ​ဒေ​ကြောင်း​အရ ​ဆောင်ရွက်မယ် ဆိုတာက တရား​စွဲမယ်လို့​ တိုက်ရိုက် အဓိပ္ပာယ် သက်​ရောက်သလား​ဗျ။
“ကျ​နော်ထင်တယ်။ ဥပ​ဒေအရ လုပ်ထုံး​ လုပ်နည်း​တွေ​တော့​ ရှိမှာ​ပေါ့​။ ကျ​နော်လည်း​ ဥပ​ဒေနဲ့​ ပတ်သက်လို့​ ကျွမ်း​ကျင်သူမဟုတ်​တော့​ ဒီထဲက​နေပြီး​တော့​ ဘာကို​ရွေး​မယ်ဆိုတာက​တော့​ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီး​ဌာနရဲ့​ သ​ဘောထား​ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်​မယ်။”
​လော​လောဆယ်မှာ ဒီလိုမျိုး​ ဝန်ကြီး​ဌာန​တွေကို အလွဲသုံး​စား​ လုပ်တာ​တွေ၊​ စစ်​ဆေး​တွေ့​ရှိတယ် ဆိုပြီး​တော့​။ ဒီလိုမျိုး​ ​ရေး​သား​ခွင့်​ အ​ပေါ်မှာ စာ​ပေစိစစ်​ရေး​က ပိတ်ဆို့​မှု မရှိဘဲနဲ့​ လွှတ်​ပေး​နိုင်တယ်ဆိုတဲ့​ အ​ခြေအ​နေကို ​တွေ့​ရတယ် ဆို​တော့​ သတင်း​လွတ်လပ်ခွင့်​ ရှိပြီလို့​ သုံး​သပ်လို့​ ရနိုင်ပါသလား​။
“The Voice ဂျာနယ်ဖြစ်စဉ်မှာ ဒီလိုဗျ။ စာ​ပေစိစစ်​ရေး​က ဒီသတင်း​ကို ​တွေ့​တဲ့​အခါမှာ သူတို့​ အယ်ဒီတာကို ဖုန်း​ဆက်ပြီး​ ​ပြောတယ်။ ခင်ဗျား​တို့​ ​သေချာပြီလား​။ ​သေချာ ခိုင်မာ​အောင် လုပ်ပါဦး​။ မခိုင်မာတဲ့​ အ​ထောက်အထား​တွေ တွဲပြီး​ ပါ မလာတဲ့​ အတွက်​ကြောင့်​မို့​ ခဏ ဆိုင်း​ငံ့​ထား​ပါဦး​ ဆိုပြီး​တော့​ ကျ​နော်တို့​က အသိ​ပေး​ အ​ကြောင်း​ကြား​လိုက်တယ်။ ဒါ​ပေမဲ့​ ဂျာနယ်တိုက်က ဒါကို ဆက်ပြီး​တော့​ ထည့်​လိုက်တာ​ပေါ့​။ အဲဒီ​တော့​ အခု သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီး​ဌာနတို့​ ဘာတို့​က ဥပ​ဒေ​ကြောင်း​အရ ​ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာကလည်း​ တကယ်​တော့​ ပြန်ကြား​ရေး​ဌာနက စာနယ်ဇင်း​လွတ်လပ်ခွင့်​ကို ပိတ်ပင်ဖို့​ လုပ်တာ​တော့​ မဟုတ်ပါဘူး​။
အရင် ကျ​နော်တို့​ ကျင့်​သုံး​တဲ့​ စနစ်အရဆိုရင်​တော့​ ကြီး​ကြပ်မှု ဗဟိုအဖွဲ့​ရဲ့​ ဆုံး​ဖြတ်ချက်နဲ့​ ဒီ The Voice ဂျာနယ်ကို ကာလ သတ်မှတ်ပြီး​တော့​ ၁ ပတ် သို့​မဟုတ် ကာလ ဒါမှမဟုတ် လုံး​ဝ ပိတ်တာမျိုး​ လုပ်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာ​တော့​ ကျ​နော်တို့​က စာနယ်ဇင်း​တွေအ​နေနဲ့​ လွတ်လပ်မှုနဲ့​ တာဝန်ယူမှုကို ခွင့်​ပြုထား​တဲ့​ အတွက် ​ကြောင့်​မို့​လို့​ ပြန်ကြား​ရေး​ ဝန်ကြီး​ဌာနအ​နေနဲ့​ ဒီကိစ္စမှာ ကြား​မဝင်ပဲနဲ့​ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီး​ဌာနအ​နေနဲ့​ ဥပ​ဒေ ​ကြောင်း​ကပဲ ဆက်ပြီး​တော့​ ​ဆောင်ရွက်ပါ။ The Voice ဂျာနယ်အ​နေနဲ့​လည်း​ မိမိသတင်း​မှန်တယ်၊​ မိမိ​ရေး​တာ မှန်တယ်ဆိုရင် တရား​ရုံး​မှာ သက်​သေပြဖို့​ပဲ လိုတယ်ဆိုပြီး​တော့​ ကျ​နော်တို့​ ကျင့်​သုံး​တာ ဖြစ်ပါတယ်။”
​နောက်ဆုံး​ အကျဉ်း​ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့​ ရှိရင် သတ္ထုတွင်း​ ဝန်ကြီး​ဌာနက ဒီလိုမျိုး​ ဥပ​ဒေ​ကြောင်း​အရ ​ဆောင်ရွက်သွား​မည် ဖြစ်​ကြောင်း​ ဆိုပြီး​တော့​ ​ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်တယ်။ ပြန်ကြား​ရေး​ဝန်ကြီး​ဌာန ကိုယ်တိုင်အ​နေနဲ့​တော့​ ဘယ်လိုမျိုး​ တုံ့​ပြန်မယ်ဆိုတာကို အခုထိ မ​သေချာ​သေး​ဘူး​လို့​ ဆိုလိုတာမျိုး​လား​။
“ဟုတ်ပါတယ်။ ပြန်ကြား​ရေး​ ဝန်ကြီး​ဌာနက ​နေပြီး​တော့​ ကျ​နော်တို့​ရဲ့​ ဒီသတင်း​အ​ပေါ်မှာ ​တွေ့​ရှိချက်ကို​တော့​ လူကြီး​တွေဆီကို တင်ပြထား​ပြီး​ ပါပြီ။ လူကြီး​တွေက ဆက်ပြီး​တော စဉ်း​စား​မှာ​ပေါ့​။ တကယ်တမ်း​ ​ပြောရရင်​တော့​ အခု အစိုး​ရ ဝန်ကြီး​ဌာန​တွေက စာနယ်ဇင်း​တွေကို ဥပ​ဒေ​ကြောင်း​အရ လုပ်မယ် ဆိုတာထက် ကျ​နော်တို့​ ပြီး​ခဲ့​တဲ့​၁ နှစ် ၂ နှစ်အတွင်း​မှာ ပြန်ကြည့်​လိုက်ရင် စာနယ်ဇင်း​အချင်း​ချင်း​ တရား​စွဲတာ၊​ မိမိအ​ကြောင်း​ မ​ရေး​ဖို့​ သတိ​ပေး​စာ ပို့​တာ​တွေက ပိုများ​နေတာကို ​တွေ့​မှာ​ပေါ့​။ ဒါ​တွေက ကျ​နော်တို့​ အခု မီဒီယာ ပြုပြင် ​ပြောင်း​လဲ​ရေး​ လုပ်တဲ့​အခါမှာ ကျ​နော်တို့​ ​တွေ့​နေရတဲ့​ ကျင့်​ဝတ်ပိုင်း​ဆိုင်ရာ အခက်အခဲ​တွေပါပဲ။
ပြန်ကြား​ရေး​ဝန်ကြီး​ဌာနရဲ့​ ​ငွေ အလွဲသုံး​စား​ ပြုမှု ဆိုတဲ့​ စကား​အ​ပေါ်မှာပဲ ဆရာတို့​ အဓိက ​ဝေဖန်တဲ့​ သ​ဘော​ပေါ့​။
“ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီ တရား​စွဲတဲ့​ ဖြစ်စဉ်က ကျ​နော် ထင်တယ်။ လွန်ခဲ့​တဲ့​ ၂ လ ၃ လ ကလည်း​ ပြစ်မှု​တွေ အ​ကြောင်း​ ​ရေး​တဲ့​ စာ​စောင်​တွေမှာ ပါခဲ့​ပြီး​ပါပြီ။ ဘယ်သူ့​ကို ကျ​နော်တို့​ အမှုဖွင့်​ပြီး​တော့​ အ​ရေး​ယူ​နေတယ်။ ​ငွေတန်ဖိုး​က ဘယ်​လောက် ရှိတယ် ဆိုတဲ့​ တရား​ရုံး​က​နေ ရတဲ့​ သတင်း​အ​ပေါ် မူတည်ပြီး​တော့​ သူတို့​ ​ရေး​ပြီး​သား​ပါ။ ကျ​နော်တို့​လည်း​ ဒီသတင်း​က လုပ်တဲ့​လူက ကျူး​လွန်တယ်၊​ ကျ​နော်တို့​ ​ဖော်ထုတ်တယ်။ ​ဖော်ထုတ်လို့​ ​တွေ့​တဲ့​အခါမှာလည်း​ ဥပ​ဒေ​ကြောင်း​အရ လုပ်သင့်​လုပ်ထိုက်တဲ့​ အတိုင်း​ပဲ ဘာမှ ဖုံး​ကွယ်တာ ကွယ်ဝှက်တာ မရှိဘဲနဲ့​ တရား​စွဲဆိုတယ်။ အထက်ဌာန​တွေကို ကျ​နော်တို့​ အဆင့်​ဆင့်​ သတင်း​ပို့​တယ် ဆိုတဲ့​ အလုပ်​တွေ လုပ်ထား​ပြီး​သား​ ဖြစ်​တော့​။ ကျ​နော်တို့​က ဒီသတင်း​ကို ပိတ်ဆို့​နေတာ မဟုတ်ဘူး​။ ကျ​နော်​ပြောချင်တာက သတင်း​ကို ​ရေး​တဲ့​အခါမှာ ပရိသတ် နား​လည်မှုလွဲ​အောင် ကျင့်​ဝတ်အရ မလိုက်နာတဲ့​ ကိစ္စကိုပဲ ​ထောက်ပြ​နေခြင်း​ ဖြစ်ပါတယ်။”
TheVoice အယ်ဒီတာချုပ်နှင့်​ ဆက်သွယ်​မေး​မြန်း​ချက်..။
သတင်း.... ဒီဗွီဘီ ·
ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့၌ ကျင်းပမည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ တွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ကိုယ်စားပြုအဖြစ် တောင်ငူမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်လောင်း ဒေါက်တာဝေဝေသာအား ဘာသာရေးအကြောင်းပြု၍ မဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့သည်ပာုဆိုကာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) ပါတီမှ ပြည် ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“အခုကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ တောင်ငူမဲဆန္ဒ
နယ်က ဝင်ရောက်မည့် ဒေါ်ဝေဝေ သာကို ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြစ်မှုတွေ ကျူးလွန်နေတဲ့အတွက် ကော်မရှင်ကို ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းထားပါတယ်”ပာု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD)ပါတီမှ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ယခုကဲ့သို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ဒေါက်တာဒေါ်ဝေဝေသာအား NLDပါတီမှ ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာ တင်သွင်းရခြင်းမှာ တောင်ငူမြို့ သမိုင်းဝင် ရွှေဆံတော်ဘုရားကြီး၏ ဓာတ်ပုံနှင့် ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနှင့် ဇနီးဒေါ်ဝေဝေသာတို့၏ ဓာတ်ပုံများကို ယှဉ် တွဲဖော်ပြခဲ့သော ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ပြက္ခဒိန်ထုတ်ဝေခဲ့ရာတွင် ရွေး ကောက်ပွဲဥပဒေများနှင့် ငြိစွန်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“တောင်ငူမြို့ သမိုင်းဝင်ရွှေဆံတော်ဘုရားကြီး၏ ဓာတ်ပုံနဲ့ အတူ ပြက္ခဒိန် မှာ တောင်ငူပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်၊ ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနှင့်ဇနီး ဒေါက်တာဒေါ်ဝေဝေသာမိသားစု လှူဒါန်းသည်ဆိုပြီး ရေးသားထားပါတယ်။ ဒီကိစ္စပာာ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ဥပဒေပုဒ်မ ၅၈ (ဂ)အရ ဥပဒေကို ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်နေရာကျပါတယ်”ပာု အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်က ဆက်လက်ဆိုသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေအခန်း(၁၄) ပုဒ်မ ၆၆(ဋ)တွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦး ရွေးချယ် တင်မြှောက်ရေးအတွက် ဘာသာရေးအထိမ်းအမှတ်များကို ရွေးကောက်ပွဲတွင် အသုံးပြုခြင်း (သို့) လူမျိုးကိုဖြစ်စေ၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာကိုဖြစ်စေ၊ အ ကြောင်းပြုမဲပေးကြရန် (သို့) မဲမပေးဘဲနေကြရန် အစီအစဉ်ပြုလုပ်လျက် လှုံဆော်ခြင်းကိစ္စရပ်များကို မပြုလုပ်ကြရန် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပေးထားကြောင်း သိရ သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ မှ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
ရက်စွဲ - ၂၀၁၂ခုနှစ် မတ်လ(၁၉)ရက်
၂၀၁၂ခုနှစ် ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ မတရားသောလုပ်ဆောင်မှုများ ပိုမိုများပြား လာပါသည်။ ယင်းပြဿနာများအနက် အချို့ကိုအောက်ပါအတိုင်း ဖေါ်ပြလိုက်ပါသည်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက် ပွဲ တွင် အနှောက်အယှက်များကိုတွေ့နေခဲ့ရာမှ ၁၈.၃.၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော် ဥတ္တရသီရိ မဲဆန္ဒနယ်မြေတွင် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးမင်းသူ၏ဟောပြောပွဲတွင် သစ်သားချွန်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခံရသဖြင့် ဦးမင်းသူ၏ လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင် အမျိုးသမီးတဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟု သိရှိရပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ အကြမ်းဖက်မှုကို အဖွဲ့ချုပ်က အစဉ်အမြဲဆန့်ကျင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့သို့လည်းအရေးယူပေးနိုင်ရန် တိုင်ကြားခဲ့ပါသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Monday, March 19, 2012 Links to this post
လာရှိုး မြို့ စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က တရုတ် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များကို ယခုလိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်.။
““ကျွန်မ ကြားတဲ့အတိုင်းပဲပြောမှာပဲ။ ကျွန်မ ဘယ်လိုကြားလဲဆိုတော့ တချို့တွေက တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ ကုန်သည်တွေကို ခြိမ်းခြောက်တယ်တဲ့။ ကျွန်မကတော့ အင်မတန်မှ အနောက်တိုင်းနဲ့ နီးစပ်တာမို့လို့ အန်အယ်လ်ဒီသာနိုင်ရင် သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်မယ် ဆိုပြီးတော့ ခြိမ်းခြောက်တယ်လို့ ပြောတယ်။
ကျွန်မ ပြောမယ်နော်။ ကျွန်မတို့ဟာ ပထ၀ီအနေအထားအရ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ကမ္ဘာကြီးတည်ကတည်းက အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဒီမိုကရေစီအစိုးရရှိတုန်းက လည်း နိုင်ငံအချင်းချင်းမှာ အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ ပြဿနာတွေအင်မတန်နည်းပါတယ်။ ကျွန်မတို့လိုချင်တဲ့ဆက်ဆံမှုမျိုးက နှစ်ဖက်စလုံး နားလည်မှုရှိတာမျိုးကိုပဲ တည်ဆောက်သွား မှာ။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာလာပြီးတော့ စီးပွားရှာတဲ့လူတွေလည်း မနာစေရမှာ။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အတွက် အမြတ်ရရှိမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းက အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာ အားလုံးကိုနားလည်စေချင် တယ်။
ကျွန်မတို့က မျှတတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်သွားမှာပါ။ ဘယ်နိုင်ငံကိုမလိုလားဘူး။ ဒီနိုင်ငံမှ လိုလားတယ်။ ဟိုနိုင်ငံမှ အခွင့်အရေးပေးမယ်။ ဒီလိုစိတ်မျိုးမရှိပါဘူး။ ကျွန်မတို့ရဲ့ နံပတ်တစ် အရေးကြီးတာက ကျွန်မတို့ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေပဲ။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေအတွက် အကျိုးရှိမယ့်စနစ်မျိုးကို ဦးတည်မှာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် တခြားသူတွေကိုလည်း အကျိုးနိမ့်စေ မယ့် အကျိုးပျက်စေမယ့် အလုပ်တွေကို ဦးစားပေးပြီးလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး””
(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ယနေ့ နေ့လည် သုံးနာရီခန့်တွင် လားရှိုးမြို့၊ ရန်တိုင်းအောင် ဘုရားကြီးကွင်းပြင်၌ လူထုအားပြော ကြားခဲ့သည့် မိနစ်လေးဆယ်ကြာမြင့်သည့် မိန့်ခွန်း မှ ကောက်နှုတ်ချက်)
ပြည်သူမကြိုက်တာလုပ်လျှင် နောက်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရှုံးလိမ့်မည်ဟု လားရှိုးခရီးစဉ်တွင် ဒီချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ပြောကြား
ပါတီစည်းရုံးရေးအတွက် မိန့်ခွန်းပြောကြားရန် NLDပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မတ်လ ၁၇ရက်နေ့ မနက်တွင် ရန်ကုန်းလေဆိပ်မှ ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီး လားရှိုးမြို့သို့ နေ့လည် ၁၂နာရီကျော်တွင် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး လားရှိုးမြို့နယ်ရှိ ရန်တိုင်းအောင်ဆုတောင်းပြည့် မြို့ဦးစေတီတီဘုရားဝင်းရှိ ကွင်းတွင် နေ့လည် ၃နာရီခန့်တွင် မိန့်ခွန်း စတင်ဟောပြောခဲ့သည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
“ဒေါ်စုက မနက် ၈နာရီကျော်လောက်မှာ ရန်ကုန်လေဆိပ်ကနေ ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ လားရှိုးကို ၁၂နာရီ လောက်ရောက်တယ်။ ပြီးတော့ လားရှိုးတက္ကသိုလ်အနားမှာရှိတဲ့ ၉၀ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ် စားလှယ်ဟောင်း ဦးသန်းဌေး၏ နေအိမ်၌ ခဏနားပါတယ်။”ဟု NLDပါတီအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
NLDပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ခေတ္တဝင်ရောက်နားခိုခဲ့သည့် ၉၀ရွေးကောက်ပွဲမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမတ်ဟောင်း တစ်ဦး၏ နေအိမ်မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာ၍ ၎င်းမိန့်ခွန်းပြောမည့် ရန်တိုင်းအောင်စေတီဝင်းအတွင်းရှိ ကွင်းပြင်တွင်ပြုလုပ်ထားသော စင်မြင့်သို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး နာရီဝက်ကျော်ကြာ မိန့်ခွန်းပြောခဲ့သည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
“မိန့်ခွန်းစပြောတော့ ရန်တိုင်းအောင် ဆုတောင်းပြည့်မြို့ဦးစေတီမှာရှိတဲ့ကွင်းက စင်မြင့်မှာ ၂နာရီနဲ့ မိနစ်၅၀ ကျော် လောက်မှာ စပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဦးသန်းဌေးရဲ့ အိမ်နားတစ်ဝိုက်မှာဆို လာပြီးကြိုဆိုတဲ့လူတွေက နည်းတာမဟုတ်ဘူး။ လမ်းအပြည့်ဘဲ။ ဒေါ်စုထွက်လာတဲ့ လမ်း တလျှောက်မှာလည်း လာရှိုးမြို့ကလူတွေကလည်း စည်စည်ကားကား ကြိုဆိုကြတယ်ဗျ။ အဲလိုကြိုဆိုတဲ့အထဲမှာ ရှမ်းအကတွေလည်း ပါတယ်။ ကွင်းကို လည်း ရောက်ရော အောက်က လူထုက ထောက်ခံတဲ့အသံတွေနဲ့ ပြည့်သွားတယ်”ဟု ယင်းမြို့မှ ဒေသခံတစ်ဦးမှ ဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မိန့်ခွန်းပြောကြားရာ၌ ယခင်က လာရောက်လည်ပတ်စဉ်တုန်းက ပြည်သူများမှာ ကြောက်နေကြသော်လည်း ယခုတွင် အားလုံးမှာ ရဲရဲဝင့်ဝင့် ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း၊ အပြောင်းအလဲလိုချင်ပါက မဲရုံသို့သွား၍ မဲထည့်ကြရန်လိုကြောင်း၊၊ တရုတ်နှင့် မြန်မာတို့သည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ များဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ စီးပွားရေးဆန်ဆန် ဆက်ဆံခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် နားလည်မှုရှိသည့် ဆက်ဆံရေးမျိုးသာ လိုချင်ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံရေး သည် လူတိုင်းနှင့် သက်ဆိုင်နေခြင်းကြောင့် တပ်မတော်သားများကပါ NLDပါတီ သို့ မဲပေးကြပါရန် စသည်ဖြင့် ပြောဆိုသွားခဲ့ပြီး နေ့လည် ၃နာရီခွဲ ကျော်တွင် ပြီးဆုံးသွားခဲ့သည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
ယင်းနောက် NLDပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယခုလာမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် လားရှိုး မြို့နယ်တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် မည့် ဦးစိုင်းမြင့်မောင်နှင့် ဦးသန်းဌေးတို့အား ပြည်သူများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးသည်ဟုလည်း သိရပြီး ၎င်း၏မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်သို့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား များ၊ “ဝ”တိုင်းရင်းသားများနှင့် လားရှိုးမြို့နယ်ရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသူ/သားများနှင့် အခြားမြို့နယ်များဖြစ်သည့် ကျောက်မဲ၊ သီပေါ၊ နောင်ချို၊ နမ္မတူ၊ သိန်းနီ၊ မိုင်းရယ်၊ တန့်ယန်း၊ မူဆယ်၊ ကွတ်ခိုင်၊ နမ့်ခမ်းမြို့မှ လူများပါ လာရောက်ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်ဟု ဒေသခံများ၏ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။
ထိုလားရှိုး၊ သိန္နီ၊ တန့်ယန်း၊ မိုင်းရယ်၊ ကွမ်းလုံမဲဆန္ဒနယ်များတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြသူများမှာ NLDပါတီမှ ဦးစိုင်းမြင့်မောင်၊ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ(USDP)မှ ဒေါက်တာနန့်ကိန်ဖောင်းတစ်နှင့် ရှမ်းအမျိုးသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(SNDP)မှ ဦးစိုင်းစံမင်းတို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲသည် အဆင့်တစ်ဆင့်သာ ဖြစ်ပြီး ဆက်လုပ်သွားရန် အများအပြား ရှိနေသည်ဟု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား
ရန်ကုန် (၀ိဇ္ဇာ/သိပ္ပံ)တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု ၂၄ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား၌
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှုတ်ခွန်းဆက် စကား ပြောကြားနေစဉ်
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲသည် အဆင့်တစ်ဆင့်သာ ဖြစ်ပြီး ထိုမှတစ်ဆင့် ဆက်လုပ်သွားရန် အများအပြား ရှိနေသေးကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မတ်လ ၁၆ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၌ ပြုလုပ်ခဲ့သော ရန်ကုန်(၀ိဇ္ဇာ/သိပ္ပံ) တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု ၂၄ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား၌ နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားရာတွင် ထိုသို့ ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
“ပြည်သူတွေရော၊ တပ်မတော်သားတွေပါ ၀ိုင်းပြီး ဒီနိုင်ငံရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက် တညီတညွတ်တည်း လုပ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့ တကယ့် အလားအလာတွေဟာ အင်မတန်မှ ကောင်းမှာပါ။ ဒီအလားအလာတွေ နောင်မကြာမီကာလမှာ ဖြစ်မြောက်လာအောင် ကျွန်မတို့ ကြိုး စားရမှာပါ။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲလေး ၀င်လိုက်လို့တော့ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက အဆင့်တစ်ဆင့်ပါပဲ။ အဲဒီကနေကျွန်မတို့ ဆက်လုပ်သွားရမှာ အများကြီးရှိပါတယ်” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းမှာ စွန့်စားမှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး မှားခြင်း၊ မှန်ခြင်းဆိုသည် မှာ မိမိ၏ ကြိုးပမ်းမှုအပေါ်တွင်သာ မူတည်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါသည်။
ပြည်သူတွေရော၊ တပ်မတော်သားတွေပါ ၀ိုင်းပြီး ဒီနိုင်ငံရဲ့ကောင်းကျိုး အတွက် တညီတညွတ်တည်း လုပ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့ တကယ့် အလားအလာတွေဟာ အင်မတန်မှကောင်းမှာပါ။ ဒီအလားအလာတွေ နောင်မကြာမီ ကာလမှာ ဖြစ်မြောက်လာအောင် ကျွန်မတို့ ကြိုးစားရမှာပါ။ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲလေး ၀င်လိုက်လို့တော့ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကအဆင့်တစ်ဆင့် ပါပဲ။ အဲဒီကနေ ကျွန်မတို့ ဆက်လုပ်သွားရမှာ အများကြီးရှိပါတယ် . . .
“နိုင်ငံရေးဆိုတာ အချိန်အခါ နဲ့ကိုက်အောင် ကျွန်မတို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချသွားရမှာပဲ။ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာ စွန့်စားချက်တွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ပြန်ပြီးတော့ ပါတီ ကို မှတ်ပုံတင်မယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မယ်ဆိုပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ၂၀၁၀ တုန်းက မ၀င်ဘူး ဆိုတာလည်း စွန့်စားမှုတစ်မျိုးပါပဲ။ အခု ၂၀၁၂ မှာ ၀င်မယ်ဆိုတာလည်း စွန့်စားမှုပါပဲ။ မှန်လား၊ မှားလားဆိုတာ အမျိုးမျိုးသုံးသပ်ကြတယ်။ နိုင်ငံ ရေးမှာအမြဲပဲ အဖြေတစ်ခုတည်း ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ အဖြေဟာတစ်ခု မကရှိနိုင်ပါတယ်။ မှန်လား၊ မှားလားဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ကြိုး ပမ်းချက်တွေအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ ကိုယ်က လမ်းတစ်လမ်းတည်း သွားနိုင်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်သွားမယ့်လမ်းကို ဆုံးဖြတ်လိုက်။ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး နောက် ဒီလမ်းဟာ အများအကျိုးအတွက် ဖြစ်အောင်လို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကြိုးပမ်းပြီးတော့ လုပ်သွားရမယ်။ ဒီလမ်းကိုကိုယ်တိုင်ပဲ ဖောက်ရင်လည်း ဖောက်သွားရမယ်။ ဆက်လက်လည်း ထိန်းသိမ်းသွားရမယ်။ အဲ တော့ ကိုယ့်တာဝန် ကျေပွန်အောင်လို့ အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်။ ဒီလမ်းမှန်တယ်၊ ဒီလမ်းမှားတယ်ဆိုတာ အမြဲပဲ ကြိုတင်ပြီးတော့ ဆုံးဖြတ် သုံးသပ်လို့ရတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး”ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါသည်။
ထို့အပြင် နိုင်ငံရေးသည် နိုင်ငံသားအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်ကြောင်း၊ နိုင်ငံပြောင်းလဲမှုများအတွက် တပ်မတော်နှင့်အတူ လုပ်ဆောင်လိုကြောင်း၊ တပ်မတော်အပါအ၀င် လူတိုင်း၊ လူတိုင်း လူမှန်နေရာမှန် ဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြခြင်းသည် နိုင်ငံရေးလုပ်ခြင်း ဟု ထင်မြင်ကြောင်း အစရှိသည့် အချက်များကိုလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
“ကျွန်မကတော့ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ဆိုတာဟာ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့ စနစ်လို့ ကျွန်မဒီလိုမြင်ပါတယ်။ စစ်တပ်နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ စနစ်လို့ ကျွန်မ မမြင်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နိုင်ငံရေးဟာ နိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့ ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာ ကျွန်မထပ်တလဲလဲ ပြောတဲ့ကိစ္စပါ။ တပ်မတော် သားတွေဟာလည်း ဒီနိုင်ငံသားတွေ ထဲမှာပါပါတယ်။ ဒါကြောင့် တပ်မတော်သားတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ ဆိုင်တယ်ဆိုတာဟာ ဒါကျွန်မရဲ့ အယူအဆပါ။ ဒါအများစုက သဘောတူချင်မှတူမယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတိုင်းနဲ့ နိုင်ငံရေး ဟာ ဆိုင်တယ်။ တပ်မတော်သားတွေ နဲ့လည်း ဆိုင်တယ်။ အရပ်သားတွေ နဲ့လည်းဆိုင်တယ်”ဟု ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်က ပြောပါသည်။
“ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့ပြောင်းလဲမှု တွေကိုလည်း တပ်မတော်နဲ့အတူ ကျွန်မတို့လုပ်ချင်တယ်။ တပ်မတော်သားတိုင်း အနေနဲ့ သူတို့ဟာ နိုင်ငံတော်မှာ တာဝန်ရှိတယ်။ နိုင်ငံရေးသိဖို့၊ နိုင်ငံရေးကို မှန်မှန်ကန်ကန် မြင်နိုင်ဖို့ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကို မြင်စေချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အုပ်ချုပ်ရေး နဲ့ နိုင်ငံရေးမတူဘူး။ အုပ်ချုပ်ရေး ကတော့ ဒီမိုကရေစီ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာ ပြည်သူတွေက တင်မြှောက်တဲ့ အရပ်သား အစိုးရသာ ဖြစ်ရမယ်။ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်သာဖြစ်တယ်။ စစ်တပ် ကတပ်မတော်သားအားလုံးနိုင်ငံရေးမှာ စိတ်ဝင်စားကြပါ။ နိုင်ငံရေးအတွက် ကိုယ်ဘယ်နေရာကို ပံ့ပိုးရမလဲ ဆိုတာ သေသေချာချာ စဉ်းစားကြပါ။ လူတိုင်းလူတိုင်း လူမှန်နေရာမှန် ဖြစ်အောင်လို့ တပ်မတော်အပါအ၀င် ကျွန်မတို့နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားအားလုံး ကြိုးစားခြင်းသာ နိုင်ငံရေးလုပ်ခြင်းလို့ ကျွန်မဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်”ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် အနေဖြင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး အစရှိသည့် အချက်သုံးချက်ကို ထိပ်တန်း ရည်ရွယ်ချက်များအဖြစ် ထားရှိကြောင်း မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့က နိုင်ငံပိုင် ရုပ်သံလိုင်းများမှ တစ်ဆင့် မဲဆွယ် ဟောပြောမှု အစီအစဉ်၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါမဲဆွယ်ဟောပြောမှု အစီအစဉ်၌ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကိုလည်း အလေးထား ပြောကြားခဲ့သည်။
“၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ မူကြမ်းထွက်ခဲ့ပြီးကတည်းက ဒီ ဥပဒေကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က သဘောမတူတာ ကြေညာခဲ့ပြီး ပြုပြင်ရမယ့် အချက်တွေကိုထောက် ပြခဲ့ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ပါတီစွဲ၊ အဖွဲ့စွဲ၊ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲတွေမထားဘဲ နိုင်ငံအကျိုးကိုသာ ရှေးရှုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ ညီညွတ်တဲ့ တပ်မတော်အင်အားစု အပါအ၀င် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အားလုံး ကညှိညှိနှိုင်းနှိုင်း လုပ်သွားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဟောပြောချက်၌ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဟောပြောချက်၌ပင် မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ရာတွင် တပ်မတော်သည် မပါမဖြစ်၊ ပါဝင်ရန် လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်း ထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ၌ ရွေးကောက်ခံ မဟုတ်သည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်နေခြင်းမှာမူ ဒီမိုကရေစီနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်း ဟောပြောချက်၌ ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့က အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် မူဝါဒရေး ရာညှိနှိုင်းရေးမှူး ဒဲရစ်မစ်ချယ်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံမှု အပြီးပြုလုပ်ခဲ့သော သတင်းစာရှင်း လင်းပွဲ၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က သူ့အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ တစ်ခုတည်းကိုသာ ရှေးရှုနေခြင်းမဟုတ်ဘဲ လွှတ်တော်တွင်း ရောက်ရှိပါက မည်မျှလုပ်ဆောင်နိုင်မည် ဆိုသည်ကို ရှေးရှုထားကြောင်း၊ ဥပဒေပြုအမတ် တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းသည် ပြည်သူလူ ထုကိုယ်စားပြုသည့် တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နိုင်ရန် အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ ရှိသင့်ကြောင်း၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၌ အနိုင်ရရှိမှုများဖြင့် လုပ်နိုင်သည်များ အများအပြားရှိနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း အစရှိသည်တို့ကို ပြောကြားခဲ့သည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Sunday, March 18, 2012 Links to this post
လာမယ့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မှာပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မယ့်...
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်တာတွေ အရေးယူပေးဖို့ NLD တောင...
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်၊ မိုးကောင်း၊ ဗန်းမော်တို့၌ ဧြ...
လွတ်လပ်သော ရွေးကောက်ပွဲ အကဲခတ်အဖွဲ့ Anfrel က မြန်မ...
"ဘဏ်သို့ရောက်လာသော အက်ဖ်အီးစီများကို ပြန်မထုတ်သော ...
ပြည်သူများကြား ပျံ့နှံ့နေသော ကဗျာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြ...
ကြံ့ဖွံ့ ဦးအောင်သိမ်းလင်း က ယခုလို ယတြာလုပ်ပြီး မ...
The Voice ဂျာနယ်ပါ သတင်း​နဲ့​ ဆက်စပ်ပြီး​ ပြန်-ဆက်...
လာရှိုး မြို့ စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစ...
ပြည်သူမကြိုက်တာလုပ်လျှင် နောက်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရှုံး...
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲသည် အဆင့်တစ်ဆင့်သာ ဖြစ်ပြီး ...